Humnootni daangaa Oromiyaa cehanii dhufan ammaan booda sochii bifa kamuu gochun dhorkaa dha! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHumnootni daangaa Oromiyaa cehanii dhufan ammaan booda sochii bifa kamuu gochun dhorkaa dha!
Humnootni daangaa Oromiyaa cehanii dhufan ammaan booda sochii bifa kamuu gochun dhorkaa dha!
Ibsa Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessa Oromiyaa
Adoolessa 02, 2021
Labsii Mootummaa Cehumsaa Sagantaa Mootummaa Cehumsaa jedhu jalatti 4.1. Nagaa fi taasgabbii Uumuu jedha.
Kun hagam fardii akka tahe lammiilee Oromiyaa qofa miti addunyaa guutuutu beeka. Dhimmoota kamuu dura kana hojiitti hiikuu jala jalaan jalqabuun barbaachisaa waan taheef humnootiin Alagaa Oromiyaa keessa jirtan guyyaa sadii keessatti akka Oromiyaa gadhiiftanii deemtan hubachiifna. Kana booda Oromiyaa keessa daangaa Oromiyaa cehee humni dhufe kamuu socho’uun dhorkaa tahuu gadi jabeessinee hubachiifna.
Humnootiin Federaalaa Dimokiraatawaa Rippabilika Itiyoophiyaa bifa kamiinuu Oromiyaa keessa jiru Kaampii kana dura yeroo dheeraaf beekkamaa kan Federaalaa qofa keessatti akka humna keessan walitti qabattanii seera eegdanii dirqama keessan seerri Federaalaa isiniif eeyyamu qofa bahattan hubachiifna.
Komand Post jedhamee beekamtii seera Federaalaan ala utubamee ummata ittiin doorsisaa, ajjeesaa fi lola gaggeeffamaa fi saamaamaa turame akka saffisaan kaafamu hubachiifna.
Ammaan booda bifa kamiinuu Oromiyaa keessa Shanee sakattaana , Shanee adamsina jedhamee sochiin gaggeeffamu fudhatama akka hin qabne hubachiifna. Akkasumas humnootni Federaalaa Oromiyaa keessa magaalaa keessas tahe baadiyyaa manneen ummataa, manneen sochii qabeenyaa sakatta’uunii fi ummata saamuu fi hiraarsuun dhorkaa tahuu hubachiifna.
Oromiyaa keessa Keellaan Sakatta’ aa fi Keellaaleen qaraxaa humnootii Federaalaa seeraan ala gaggeeffaman lakkoobsi isaanii guddaa tahuu fi kan Lammiileen ittiin hiraarfamanii fi doorsifaman tahuu hundatu beeka. Ammaan booda humni Federaalaa kamuu Oromiyaa keessa keellaalee akkasii tohatuun dhorkaa tahuu hubachiifna.
Oromiyaa keessas tahe Federaala Dimokrataawaa Ripublika Itophiyaa keessa Meeshaa lolaa seeraan ala sochiin isaa daangaa fi sirna dhabaa tahuu kan hin beekne hin jiru. Kunis nageenya ummata balaaf saaxiluu keessatti gahee guddaa qaba. Ammaan booda sochiin meeshaa lolaa seeraan alaa fi qaama Oromiyaan alaa kamuu aanaa irraa aanaatti, daangaa Oromiyaa qaxxaamursuun sochoosuun yakka waan taheef seeraan gaafachiisaa tahuu hubachiifna.
Nageenya ummataa tiksuu tarkaanfiilee jalaqabaa kana hojiitti hiikamuu isaanii tohatuuf Humnootiin Oromiyaa, Caasaan bulchinsaa MCBNO fi ummatni keenya bakka hundaa waan armaan oliitti tarrifaman hojiitti hiikamuu naamusaa fi seeraan akka tohannoo gootan hubachiifna.
Dhimmoota kamuu dura Nagaa fi taasgabbii Uumuu hojiitti hiikuun jalqabuun barbaachisaa waan taheef humnootiin Alagaa Oromiyaa keessa jiran Oromiyaa keessas socho’uun dhorkaa tahuu hubachiifna. Kana booda Oromiyaa keessa daangaa Oromiyaa cehe humni dhufe kamuu socho’uun dhorkaa tahuu gadi jabeessinee hubachiifna.
Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa (MCBNO)
Humnootni Daangaa Oromiyaa Cehanii Dhufan ammaan booda Sochii bifa kamuu gochuun dhorkaa dha
Humnootni Daangaa Oromiyaa Cehanii Dhufan ammaan booda Sochii bifa kamuu gochuun dhorkaa dha Ibsa Mootummaa…
Finfinneef Daangaa Bulchiinsaa Sararuu Caalaa Mirgi Abbummaa Oromiyaa Heereffamee Bulchiinsi Isii Oromiyaa Jala Galuutu Furmaata…
Torbee lamaa booda waraanni Oromiyaa guututtii labsamuuf!
Torbee lamaa booda waraanni Oromiyaa guututtii labsamuuf! Jeeneraala Biraanuu Juulaa fi obboo Abiyyi Boo'aa jiruu!!…
UN warns of worsening famine in Ethiopia’s Tigray, urges rebels to ‘immediately’ endorse ceasefire